အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်တွင်ဘဝအသက်တာရှိပါတယ်? - သတင်း Rule
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်တွင်ဘဝရှိပါသလား? ExoMars Trace ဂတ်စ် Orbital ရှာဖွေရေးတက်ယူ” စတူးဝပ် Clark ကကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com သောကြာနေ့ 11 မတ်လအပေါ်များအတွက် 2016 08.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ဥရောပအာကာသအေဂျင်စီ၏ပစ်လွှတ် (ESA) တနင်္လာနေ့က ExoMars Trace ဂတ်စ် Orbital အာကာသယာဉ် 14 မတ်လအာကာသတူးဖော်ရေးအတွက်သိသာထင်ရှားသောအခိုက်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အသက်အဘို့အရှာဖွေရေးအတွက်အသစ်တစ်ခုကိုအစအဦးခြေတစ်လှမ်း.
အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အသက်တာ၌အကျိုးစီးပွားရာစုနှစ်များစွာကျောကြက်. 17 ရာစုဒတျချြနက္ခတ္တဗေဒပညာရှင် Christiaan Huygens သူ့စာအုပ်အတွက်ခန့်မှန်းသုံးသပ်သည် Cosmotheoros အသက်အဘို့လိုအပ်သည့်အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်.. သူကအင်္ဂါဂြိုဟ်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားဂြိုလ်စည်ပင်မရနိုငျသောအဘယ်သူမျှမအကြောင်းပြချက်ကိုမြင်လျှင်.
သူမြို့သားတို့ '' Planetarians '' ဟုခေါ်တွင်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏အမြင့်ဂြိုဟ်၏အရွယ်အစားအားဖြင့်နှုတ်တိုက်ချပေးခဲ့တာမည်ဖြစ်ကြောင်းသဘောထားပေးလေ၏, ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ပြုပါအဖြစ် - သူတို့လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူပတ်ပတ်လည်ရွှေ့ဖို့လုံလောက်တဲ့ကြီးမားခဲ့ကြသောကြောင့်.
18 ရာစုအတွင်းက William Herschel အင်္ဂါဂြိုဟ်ကိုလေ့လာ, ထွန်းတောက်ဝင်ရိုးစွန်းထုပ်သတိပြုနှင့်ဂြိုဟ်ပေါ်တွင်မှောင်မိုက်အမှတ်အသားများဖြစ်နိုင်သမုဒ်ခဲ့ကြကြောင်းယူဆ. သူကကမ္ဘာမြေနှင့်အင်္ဂါဂြိုဟ်အတန်ငယ်ဆင်တူကြ၏ထင်, ထိုဂြိုဟ်၏မြို့သား "ဖြစ်ကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလားတူအခြေအနေမျိုးမွေ့လျော်။ " အဲဒီ Royal Society ၏အဒဿနပညာရှင်အရောင်းအဝယ်အတွက်ရေးသားခြင်း
တစ်ရာစုနောက်ပိုင်းတွင်, နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်ကွဲပြားခြားနားတဲ့အရာတစ်ခုခုစဉ်းစားခဲ့ကြ. အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းအားလုံးအချိန်ကိုတိုးတက်အောင်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်မှောင်မိုက် '' သမုဒ် '' ဆက်သွယ်ထားသောဖြောင့်မှောင်မိုက်တဲ့လိုင်းများဖြစ်ထငျရှားသောအရာကိုမြင်လျှင်ခဲ့သည်.
အမေရိကန်နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင် Percival ယျလျကဤတူးမြောင်းသောအယူအဆခေတ်စားလာ. အင်္ဂါဂြိုဟ်အများအားဖြင့်စွန့်ပစ်ခဲ့, သူထင်, နှင့်ဤတူးမြောင်းဟာသူတို့ရဲ့သေဆုံးကမ္ဘာရေတစ်ယဉ်ကျေးမှုတိုက်ပွဲတွေ၏နောက်ဆုံးသောကျုံးကဲ့သို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုခဲ့ကြ.
HG ဝဲလ်နှင့်သူ၏ဝတ္ထုလောက၏အစစ်များအတွက်စိတ်ကူးထောက်ပံ့လှုံ့ဆော်မှု, ထိုဂြိုဟ်၏အိမ်တွင်သူတို့ရဲ့ရန်ပွဲစွန့်လွှတ်ခြင်းနှင့်အစားကမ္ဘာမြေကျူးကျော်သည့်အတွက်.
ဒါဟာယခုအခါ '' တူးမြောင်း '' အနည်းငယ်ယုတ်ညံ့အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်ထုတ်လုပ် optical လှည့်စားမှုရှိကြ၏ထင်သည်. အဖြစ်မကြာမီနည်းပညာတိုးတက်, လိုင်းများတဖနျကိုမွငျဘယ်တော့မှခဲ့သည်.
20 ရာစုအားဖြင့်, အင်္ဂါဂြိုဟ် '' လေထု၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲမဆိုရေငွေ့ပစ္စုပ္ပန်ရှိကွောငျးကိုပြသ, နှင့်ဤထားရေ၏ကြီးမားသောအလောင်းတွေအရပ်၌သောစိတ်ကူးမှပေးဆောင်. 1960 ခုနှစ်တွင်ပထမဦးဆုံးအာကာသယာဉ်၏အဆိုပါဆိုက်ရောက်ရှိဝေးလံသောအတိတ်၌ရေဖြစ်နှင့်ဤနောက်ဆုံးမှာပိုးမွှားဘဝလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဘီလျံဖွဲ့စည်းဖြစ်ကောင်းအချို့သောနေဆဲအပေါ်ဖက်တွယ်ကြောင်းနိုင်သောငါတို့လက်ရှိအတွေးအခေါ်များမှဦးဆောင်ခဲ့ကြောင်းပြသ.
1970 နှောင်းပိုင်း, ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်ဆင်းထိမိနာဆာရဲ့နှစ်ဦးဗိုက်ကင်းမစ်ရှင်. တစ်ခုချင်းစီကို lander ဘဝထုတ်ဖေါ်နိုင်ကြောင်းလေးကွဲပြားခြားနားသောစမ်းသပ်ချက်ဖျော်ဖြေနိုင်စွမ်းတဲ့ဇီဝဓါတ်ခွဲခန်းတွင်ပါရှိသော. ထိုတံဆိပ်ကပ်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်စမ်းသပ်မှုပိုင်းတွင်အပြုသဘောရလာဒ်များကို ပေး. ပေမယ့်, အကြိမ်ကြိမ်အခါပျက်ကွက်.
အခြားသုံးစမ်းသပ်ချက်သာအနုတ်ရလဒ်တွေကိုပြသဒါတရားဝင်နာဆာမရှိဘဝရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကွောငျးကြေညာ. အငြင်းပွားဖွယ်, အချို့သောသိပ္ပံပညာရှင်တံဆိပ်ကပ်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်စမ်းသပ်မှု၏ကနဦးအောင်မြင်မှုကိုအသက်တာ၏အထောက်အထားအဖြစ်ဆက်ဆံသင့်ကြောင်းဆိုကြသည်ဆက်လက်.
မည်သို့ပင်ထိုကဲ့သို့သောတောင်းဆိုမှုများ၏, နာဆာပြီ ပယ်အသက်အဘို့အရှာဖွေနေမှရွေ့လျား အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်. အစား, သူတို့အင်္ဂါဂြိုဟ်စီးဆင်းနေသောရေနှင့်တစ်ဦးထူလေထုနှင့်အတူတစ်ချိန်ကပိုပြီးကမ္ဘာမြေကဲ့သို့သောသက်သေအထောက်အထားများအားစုံစမ်းစစ်ဆေးအာရုံစိုက်ခဲ့ကြ.
နောက်ဆုံးပေါ်လှည့်ကွက်ထဲမှာ serendipitously စတင် 2003. ESA ရဲ့အင်္ဂါဂြိုဟ် Express ကိုအာကာသယာဉ်ဂြိုလ်ရဲ့လေထုထဲတွင်မီသိန်း၏တစ်ဦးစမ်းသဘောထောက်လှမ်းလုပ်. မီသိန်းတိုတောင်းတဲ့-နေထိုင်ခဲ့ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ပါသည်, နှင့်ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် lifeforms အားဖြင့်အဓိကအားဖြင့်ထုတ်လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်.
တွင် 2014, နာဆာရဲ့ Curiosity rover ကိုလည်းဓာတ်ငွေ့ whiffs တွေ့ရှိ. ဖြစ်ကောင်းအင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အသက်ရှင်သေးပိုးမွှားအသိုင်းအဝိုင်းရှိကြ၏သောဤတိုးမြှင့်ထင်ကြေး, ဓာတ်ငွေ့ကိုထုတ်လုပ်. ၏မကြာသေးမီကထောက်လှမ်း အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်တွင်ရေပြေး ဒါ့အပြင်လောင်းကြေးလာကြသည်.
သို့သော်, there is also the chance that the methane is produced by geological processes.
On which note, Esa is sending the ExoMars rover to Mars’s surface တွင် 2018. It will be equipped with instruments capable of detecting the signs of past and present microbial life.
26647	3 Across the universe, အပိုဒ်, Astronomy, Blogposts, ဥရောပအာကာသအေဂျင်စီ, အင်္ဂါဂြိုဟ်, သိပ္ပံ, သိပ္ပံဘလော့ဂ်ကွန်ယက်ကို, အာကာသ, Stuart Clark
← အန်းဒရွိုက် N က: Google က OS ကို၏အနာဂတ်ဖော်ပြ HTC ကအဆိုပါ Vive အကြို VR နားကြပ် – Verge အားဖြင့်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း [VIDEO] →